New Day Jobs | Top5Skillset for Digital Marketer | Career Blogs
Career Advice Workplace Success 25 Feb 2020
Thein Htike Aung,Digital Marketing Manager
Top Five Skillsets for Digital Marketer
ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းဆိုတာ ယခုခေတ်မှာ အရမ်းခေတ်စားတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကုန်ပစ္စည်းတွေကြေငြာဖို့၊ ရောင်းချဖို့၊ တိုးချဲ့ဖို့အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းနှင့် ကင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်း လုပ်တတ်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့အချက် (၅) ချက်နှင့် ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်မလဲ အကြောင်းအရာကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အင်တာနက်နှင့် အွန်လိုင်းလို့ပြောရင် Google ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်ဆရာကြီး အကြောင်းကိုသိထားဖို့ဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းလုပ်မဲ့သူတွေအတွက် အရေးတကြီးသိထားရမဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲ?သင်တန်းတွေပြေးတက်စရာမလိုပါဘူး။ အိမ် (သို့) အင်တာနက်ရမဲ့ ကော်ဖီဆိုင်မှာ အင်တာနက်ဆရာကြီးကပို့ချပေးနေတဲ့ အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာယုံပါပဲ။
Facebook ဟာ မြန်မာပြည်မှာ လူကြိုက်များ အသုံးပြုအများဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းကောင်းဖို့ဆိုရင် ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေက လူဘယ်လောက်များများ စိတ်ဝင်စားလဲ? ဘယ်ဒေသတွေ ကြိုက်တဲ့သူဘယ်လောက်ရှိကြလဲ? အသက်အရွယ်တွေကကော...?ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် Facebook ကနေ စီးပွားရေးကုန်ပစ္စည်း ကြေငြာသူတွေအသုံးချနိုင်ဖို့ တစ်နေရာထဲမှာကြည့်ရှုလို့ရနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://www.facebook.com/ads/audience-insights/
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီဇိုင်းသင်တန်းတွေတက်ပြီးမှ ဒီဇိုင်းတစ်ခုဆွဲတက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေအတွက် Web App တွေနဲ့ Mobile App တွေ အများအပြားပေါ်လာပါပြီ။ ဒီထဲကမှ Professional Tool တစ်ခုကို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Canva က အကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ Sample Template တွေလည်း ပေးထားတာဆိုတော့ တစ်နေရာထဲမှာ ပြီးပြည့်စုံပြီပေါ့...Canva ကို သုံးချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ https://www.canva.com/ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Canva ကို လေ့လာလိုပါက ဒီနေရာမှာ https://www.canva.com/learn/ သွားရောက်လေ့လာ နည်းနာနိုင်ပါတယ်။
အရင်က ဗီဒီယိုတစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ကင်မရာတစ်လုံးလိုအပ်သလို၊ တည်းဖြတ်ဖို့ကလည်း သင်တန်းတက် လေ့လာဖို့တွေကို လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဖုန်းဖြင့် အလွယ်တကူ အကောင်းဆုံးရုပ်ထွက်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ကြသလို ဖုန်းပေါ်မှာပဲ တည်းဖြတ်လိုက်ယုံပါပဲ။ ဒီ Web App လေးကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်ဖြစ်၊ ကွန်ပြူတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ ဗီဒီယိုတွေကို တည်းဖြတ်နိုင်သလို နောက်ဆုံးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ https://www.wevideo.com/ သွားရောက်ပြီး ဗီဒီယိုတွေကို တည်းဖြတ်လိုက်ပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ယခင်က လူတော်တော်များများမှာ အီးမေးလ်မရှိကြသလို၊ အီးမေးလ်လည်း သိပ်မသုံးတတ်ကြပါဘူး။ ဒါနောက်ပိုင်း အီးမေးလ်တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာကြသလို၊ အီးမေးလ်ဖြင့် သတင်းရယူးခြင်း၊ ပွဲဖိတ်ကြားခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းတွေအတွက် Email Direct Marketing အရေးပါလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အီးမေးစောင်ရေများများ ပေးပို့ဖို့နှင့် ဒီဇိုင်းလှလှ အထာကျကျ အီးမေးလ်ပို့ဖို့ကလည်း အရေးပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့် Email Direct Marketing တွေအတွက် အသုံးများတဲ့ Tool ဖြစ်တဲ့ Mail Chimp ဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းသမားတွေအတွက် ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ Mail Chimp ကို ဒီနေရာမှာ https://mailchimp.com/ ဝင်ရောက်အသုံးပြုပါ။ လေ့လာလိုပါက ဒီဗီဒီယို - https://www.youtube.com/watch?v=tZKYiiQP57I မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။